Omenala niile nke Italy ị kwesịrị ịma | Akụkọ njem
Louis Martinez | | omenala, Italia
na omenala ndị Italy Ha bụ nke obodo nwere mgbọrọgwụ Greco-Latin, otu ndị ahụ mebere ọdịnala Spanish kemgbe ọtụtụ narị afọ. Yabụ, ha adịghị iche na nke anyị, opekata mpe n'ihe kacha mkpa na ndị nna ochie.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị ihe anyị ka gwara gị ugbu a, omenala Italytali na -egosi ihe pụrụiche nke na -eme ka ha dị iche na ndị na -eme na mba ndị ọzọ nke ọdịbendị ha nwekwara. Mkpụrụ mkpụrụ Latin. Ọ nweghị ihe ha ga -eme, dịka ọmụmaatụ, ọdịnala gastronomic nke French (ebe a ka anyị hapụrụ gị akụkọ gbasara ha) ma ọ bụ Portuguese ya na ndị obodo transalpine. Yabụ, anyị ga -agwa gị gbasara ụfọdụ omenala Italiantali ndị pụrụ iche.
1 Site n'ikwu okwu gaa n'omenala okpukpe
1.1 Expressiveness, ezigbo onye Italiantali
1.2 Nri, emume n'etiti omenala Italy
1.3 Okpukpe, nke sitere na ndị Itali
1.4 Ịkwọ ụgbọala, okwu na -echere
1.5 Uwe, laghachi na ejiji
1.6 Opera, ezigbo omenala ndị Itali
1.7 Na -eme ngagharị iwe, pụtakwara agwa ndị Itali
1.8 Okwu na ahịrịokwu
Site n'ikwu okwu gaa n'omenala okpukpe
Ihe mbụ anyị ga -agwa gị gbasara omenala Italy bụ na anyị ga -agwa gị gbasara obodo nke, dịka onye ọ bụla ọzọ, nwere ọtụtụ. N'otu ụzọ ọdịnala ndị Andalus si dị iche na nke ndị Galician, ndị Sicilian na -eme otu ihe ahụ na nke Piedmont. Agbanyeghị, dịkwa ka ọ dị na mba niile, usoro ọdịbendị na -emekarị omenala ndị Ịtali niile na -ekerịta. Ka anyị hụ ha.
Expressiveness, ezigbo onye Italiantali
Expressiveness, omenala na Italy
Otu n'ime ihe ga -eju gị anya mgbe ị na -aga Italy bụ ụzọ nkwurịta okwu nke ndị bi na ya. Site na nsọtụ ugwu ruo na ndị bi na ndịda ndịda, ha na -ekwu okwu nke ukwuu, ruo n'ókè nke, mgbe ụfọdụ, ọ na -adị ka ha na -ese okwu.
Agbanyeghị na ọ na -ada ụda, ọ bụ eziokwu, ọ bụghị naanị ihe nkiri ama ama. Ndị Ịtali na -ekwupụta onwe ha na akụkụ ahụ gị niile. Ha na -eji aka ha emebiga ihe ókè, na -ekwu okwu n'olu dị elu na mgbe ụfọdụ ọbụna na -eso mmegharị ha na mmegharị ndị ọzọ. Na nkenke, maka transalpinos nkwurịta okwu na-abụghị nke dị nhata ma ọ bụ karịa karịa okwu.
Nri, emume n'etiti omenala Italy
Okpokoro dị njikere iri nri
Enwere ọtụtụ omenala Ịtali metụtara ụwa nri. Ha ga -eme ma efere ndị bi na ya na -atọ ụtọ yana ọdịnala ndị nna ochie nwere ike ịme gị asị ma ọ bụrụ na ịmaghị ha. Anyị ga -agwa gị gbasara ha.
I kwesịrị ịma na ọ bụrụ na ị gaa leta onye Italiantali n'ụlọ ya, nri dị mkpa. Ọ ga na -enye gị ihe ka ị rie ma drinkụọ. Ọ ga -agwa gị ka gị na ya nọrọ maka nri ehihie ma ọ bụ nri abalị. Anyị nwere ike ịgwa gị na nri bụ a dum ememe maka ndị Ịtali. Karịa inye nri, maka ha ọ bụ omume mmadụ.
Ka ị bịa rie nri na mba, ị ga -amarịrị ihe ole na ole. Nọmalị, ihe mbụ ị ga -ahụ na tebụl bụ ọgwụ mgbochi. Site n'aha a, a na -akpọ ụdị ndị mbido nke, dị ka aha ha na -egosi, na -emebeghị pasta. Ha nwere ike ịbụ soseji ma ọ bụ nri mmiri. Mana ha na -ahụkarị, dịka ọmụmaatụ caponata, ofe Sicilian a na -ahụkarị; nke frittata, ụdị omelet juru eju; nke Onye Afrịka, chiiz siri ike nke Friuli, ma ọ bụ mgbapụta Roman, nke bụ osikapa croquette.
Mgbe antipasto gachara, a ga -enye gị usoro izizi na nke abụọ. Otu n'ime ndị a nwere ike ịbụ spaghetti na ebipụla ya ma ọ bụ rie ya na ngaji. Maka ndị Ịtali ọ bụ ihe arụ. N'ikpeazụ, nri ga -ejedebe na ihe dolce. Agbanyeghị, njedebe ikpeazụ ga -abụ kọfị, nke a na -apụghị izere ezere na Italy na nke ị kwesịkwara ịma ihe ụfọdụ.
Ihe ị na -ekwesịghị ime, ọkachasị na mpaghara dịka Tuscany, bụ ịtụ kọfị. Ha ga na -ele gị anya dị ka onye ọbịa. Chọrọ maka a igwe expresso ma ọ bụ bee, otu ristretto ma ọ bụ obere kọfị ma ọ bụ okpukpu abụọ ma ọ bụ abụọ. Agbanyeghị, ihe a na -ahụkarị bụ cappuccino, nke nwere kọfị akụkụ ya, mmiri ara ehi na -ekpo ọkụ na ụfụfụ mmiri ara ehi.
N'ikpeazụ, n'ogologo ogologo a raara nye nri na Italy, anyị ga -agwa gị na, maka transalpine, nne ya na nne nne ya bụ ndị osi nri kacha mma n'ụwa. Maka ha, akwụkwọ Mamma na nne nne ha na -esi nri ka mma karịa onye ọ bụla ọzọ na anaghị ajụ ya ajụjụ. Ọ bụghị n'efu, maka onye Ịtali ezinụlọ ya dị nsọ.
Okpukpe, nke sitere na ndị Itali
Ihe omume Katọlik
Akụkụ ọzọ e ji amata transalpinos bụ okpukpe miri emi ha. N'agbanyeghi na, dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, naanị 30% nke ndị Italy kwetara na ha bụ ndị Katọlik, ọdịnala okpukpe dị ha ezigbo mkpa na ọ dị mkpa ka ị kwanyere ya ùgwù. N'ezie, ọ dị mkpa na, kama, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ndị mmadụ na -ekwupụta na ha bụ ndị kwere ekwe.
Ọ bụghị ihe ndabara na Italy Vatican (lee, anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara obodo a), oche nke okpukpe Katọlik. Yabụ, na mba transalpine enwere ọtụtụ agbamakwụkwọ na ime baptizim, yana emume ndị ọzọ dị ka mmemme na ngagharị iji sọpụrụ ndị nsọ. Ọzọkwa, dị ka ihe niile ha na -eme, ndị Ịtali ha na -ebi ọkụ ọkụ n'okpukpe ha.
Ịkwọ ụgbọala, okwu na -echere
Ụgbọ ala na -aga Rome
Ihe anyị ga -agwa gị nwere ike ịdị ka ihe a na -ekwukarị na, n'ozuzu ya. Agbanyeghị, ikwere na ọ nwere ike ịchekwa ndụ gị. Maka ikwu okwu n'ozuzu, ndị Itali bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala dị egwu. Ma ọ bụ, ka mma ịsị, ọ dị ntakịrị nkwanye ugwu maka ụkpụrụ okporo ụzọ.
N'obodo ukwu nke obodo ahụ, ụgbọ ala na -awụpụ ọkụ na -acha ọbara ọbara, na -erute ebe na -adịghị mma na nke ọ bụla na -agbagharị ebe ọ chọrọ. Okporo ụzọ ya dị ka ezigbo sekit ịgba ọsọ. Mana nke kachasị, agafela ụzọ gafere na -ekwenye na ụgbọ ala ndị ahụ ga -akwụsị. Ha anaghị eme.
Uwe, laghachi na ejiji
Ihe ngosi ejiji
Ịmata Ịtali na ejiji aghọwo ihe a ma ama. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ nnukwu ndị nrụpụta anọwo na transalpine, mana ọ bụghị ihe dị mkpa ka ndị Ịtali nkịtị na -eji ejiji dịka usoro ọhụrụ siri dị.
Agbanyeghị, ọ bụ eziokwu na, n'ozuzu, ha na -echegbu onwe ha banyere ọdịdị ha. Ị gaghị ahụ ha ka ha na -akpọnwụ ọbụlagodi na nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ na mgbatị ahụ. Ha na -akpachapụ anya na nke ha ọnụnọ mara mma (ọdịdị dị mma) na nke a gụnyere, ọ bụghị naanị uwe, kamakwa ụdị edozi isi na ngwa.
Opera, ezigbo omenala ndị Itali
Ihe nnọchiteanya nke 'Aída' site Verdi
N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị Ịtali bụ ezigbo ndị hụrụ egwu n'anya. Na, n'etiti ụdị egwu niile, opera na -amasị ha. Ọ bụghị ihe ndabara, ebe ọ bụ na a mụrụ ụdị ihe a na mba transalpine.
Ihe okike mbụ enwere ike ịtụle bụ opera bụ Daphne, na Jacob Peri, onye dere ya na 1537. Agbanyeghị, ọ ga -abụ na narị afọ nke XNUMX mgbe ụdị ahụ ruru oke ewu ewu na ndị edemede dịka Gioachino rossini, Francesco Bellini na n'elu ihe nile, Giuseppe Verdi.
Nke ikpeazụ bụ maka mgbasa ozi opera. Ịtali tụgharịrị ọrụ ha akara nke ịdị n'otu nke mba ahụ na, na ya, ha ghọrọ nnukwu ewu ewu. Kemgbe ahụ, ọ bụ agụụ ndị Ịtali naanị ka nke ha nwere maka bọọlụ, nke ọzọ bụ nnukwu omenala Italy, n'agbanyeghị na nke a bụ ọtụtụ mba ndị ọzọ.
Na -eme ngagharị iwe, pụtakwara agwa ndị Itali
Mkpesa n'okporo ụzọ
Ihe ọzọ ga -eju gị anya ma ọ bụrụ na ị gaa Ịtali bụ na ndị bi na ya na -etinye oge ha na -eme ngagharị iwe gbasara ihe niile. Ihe na, na mgbakwunye, a na -emesi ya ike site na oke iwe ọkụ ya. Ọ baghị uru ma ọ bụ n'ihi na ụgbọ njem ọha ha na -eche abịarutela n'oge, n'ihi na gọọmentị na -ezuru ha ihe ma ọ bụ, n'ihi na ndị otu egwuregwu bọọlụ ha adịghị mma, transalpinos na -enwe mkpesa mgbe niile.
Agbanyeghị, ọ na -atọ ha ụtọ ime ngagharị iwe dịka ekworo maka ala ha. Nke a pụtara na ị gaghị eme mkpesa gbasara Italytali. Ọ bụrụ otu a, ha ga -abụ ndị kacha hụ mba n'anya n'ụwa ma mee omume gị ihe jọrọ njọ. Naanị ha nwere ike ịkatọ obodo ha.
Okwu na ahịrịokwu
Anyị na -akwụsị njegharị nke omenala Italiantali site n'ịgwa gị banyere ụfọdụ okwu a na -ahụkarị na obodo niile nke ya na ahịrịokwu anyị setịpụrụ. Agbanyeghị na ha sitere n'asụsụ na -emekọ ọnụ, ọ bụrụ na i jiri ya mee ihe, ị ga -adị ka ezigbo onye Italiantali.
Dịka ọmụmaatụ, ka quattr'occhi pụtara anya anọ, mana ejiri ya kwuo na mmadụ abụọ ga -edozi okwu, na -enweghị onye ọzọ tinyere aka. Iziga mmadụ ka ọ mechie ọnụ, ha na -ekwu mmiri na bocca. N'akụkụ nke ya, okwu ligarsila ka ọ dito ọ na -atụgharị ka ọ na -ekegide ya na mkpịsị aka, mana ọ pụtara na mmadụ na -echeta mbibi emere ya iji megwara ihe emechaa. Ọ bụrụ na ekwuru cadere della padella alla ihe nkwado ọ pụtara isi na pan dapụ na nri, mana ọ pụtara na ị siri na ọnọdụ ọjọọ banye na nke ka njọ. Ọ ga -adị ka anyị isi na Guatemala gaa "guatepeor." N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ha asị na mmadụ bụ ọ dị m ka m ga -enweta isi okwu Ha na -egosi na ọ jọgburu onwe ya dịka mmehie asaa ahụ na -egbu egbu, na ọ ga -adị ka imi anyị jọrọ njọ.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ kacha mkpa omenala ndị Italy. N’ụzọ ezi uche dị na ya, ị gaghị echefu na ọ bụ obodo niile nwere ọdịnala mpaghara dị iche iche, mana ndị niile anyị kpọtụrụ aha nwere ike ịchọta site na mgbago ruo na ndịda yana site n’ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ. Anyị ahapụkwala omenala ndị ọzọ dịka agwa nke mee ka mmadụ mara ogo mahadum ha nwere (dịka ọmụmaatụ, onye ọka iwu Buscetti) ma ọ bụ ihe na -amasị ya agụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Omenala ndị Itali
Oke osimiri kacha mma na Ibiza